Netkiosk ကို kiosk ဆော့ဖျဝဲ | ကို kiosk software ကိုရိုးရှင်းတဲ့လုပ်!
Netkiosk နျ Standard 2019
Netkiosk Imperial 2019 (Chrome ကို Kiosk အ)
Netkiosk Desktop ကို Lock ကို 2019
Netkiosk 2019 (4 လိုင်စင်များ)
Netkiosk 2019 (အပိုလိုင်စင်များ)
Windows အတွက် Netkiosk | Professional က Kiosk အဆော့ဝဲရိုးရှင်းတဲ့လုပ်!
ကှေးနိုငျသော | customization
ကှေးနိုငျသော | ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပြုပါ
မည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုရန်အစွမ်းထက်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Kiosk အ Software များ။
ရိုးရှင်းပြီးအစွမ်းထက် admin ရဲ့ panel ကအားလုံးထိန်းချုပ်မှု | မိနစ် Setup ကိုသင့်ရဲ့ကို kiosk device ကို။
Netkiosk Kiosk အ Software များ
မည်သည့်တည်နေရာ Professional ကကို kiosk ဆော့ဖ်ဝဲ။
Netkiosk သင်လုံခြုံ admin ရဲ့ control panel ထဲကနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာ (s) ကိုလုံခြုံဆင်းသော့ခတ်ဖို့ကူညီလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ထိရောက်သောကို kiosk software ကိုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများသည်ကိုသင်ခွင့်ပြုထားသောသူမြားကိုထက်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုရယူပေးနိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသေချာစေခြင်းငှါအလိုရှိ၏။ သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီရန်သင့်အသုံးပြုသူများအတွက် Netkiosk configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Netkiosk အသုံးပြုခြင်းသင်သည်သင်၏ kiosk နှင့်ကွန်ယက်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်သင်စိတ်စုစုပေါင်းငြိမ်းချမ်းရေးပေးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ တိကျတဲ့က်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများ, directory များနှင့်ပင် applications များဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့အဆုံးအသုံးပြုသူကန့်သတ်ဧရိယာများဝင်ရောက်ဖို့မတတ်နိုင်ကြောင်းစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။ သင်သာ Netkiosk configure အခြေခံအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုလိုပါတယ်။ Netkiosk အားလုံးကို Windows ဗားရှင်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝကသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီဖို့ Netkiosk စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ Netkiosk သင့်တည်နေရာမှာအလုပ်မလုပ်စေလိုပေမည်ဆိုလိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများအောင်နေဖြင့် Netkiosk ထဲကအများဆုံးရရန်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
Netkiosk နျ Standard
built-in ကို PC နှင့်အတူလုံခြုံ kiosk browser ကိုမဆိုတည်နေရာသင့်လျော်သော features တွေချ lock ။
လုံခြုံ kiosk မုဒ်အတွက်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုက်ဘ်ဆိုက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါ။
Netkiosk နျ Standard ပြည့်စုံကို kiosk software ကိုဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျချက်ချင်းဆင်း lock နှင့်သင့် Windows ကိုကိရိယာ (s) ကိုလုံခြုံနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျတဲဘ်တပ်ထား browser ကိုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက် kiosk မုဒ်မှာရှိတဲ့ Netkiosk နျ Standard run နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအလွယ်တကူ configure ရန်လွယ်ကူ admin ရဲ့ panel ကမှတဆင့်တဲဘ်တပ်ထား browser ကိုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက် kiosk မုဒ်ညှိနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပင်မစာမျက်နှာ lock နှင့်အများပြည်သူလက်လှမ်းမီရာမှမည်သည့်ကွန်ပျူတာလုံခြုံနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအရယူနိုင် URL ကိုလိပ်စာများကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများကိုနှင့်အတူသူမြားကိုကန့်သတ်။ သင်တစ်ဦးအသုံးပြုသူ built-in အဖြူရောင်စာရင်း filter ကိုကနေတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သငျသညျကိုလည်း built-in အကြောင်းအရာ filter ကိုအတူဆိုဒ်များသို့မဟုတ်သော့ချက်စာလုံးများပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျချက်ချင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီမှ menu ကအရက်ဆိုင်, ခလုတ်နှင့်အသုံးပြုသူရွေးချယ်စရာ enable သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်အခြား web browser များရယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
တဲဘ်တပ်ထားကို kiosk browser ကို။
admin ရဲ့ panel က Secure ။
စိတ်ကြိုက်ပျင်းရိအချိန် timer နေရာမှာ။
built-in အကြောင်းအရာ filter ကို။
custom သို့မဟုတ် Windows OSK ။
အရွယ်အစား 3.5 mb Install
အားလုံးကို Windows ဗားရှင်းအပေါ်အကျင့်ကိုကျင့်။
နောက်ထပ်အင်ဖို။ / စမ်းသပ် download လုပ်ပါ။
Netkiosk Imperial (Chrome ကို Kiosk အ)
အဆိုပါ No.1 Google Chrome ကို kiosk မုဒ်ဖြေရှင်းချက်အပ်နှံလိုက်တယ်။
သင့်ရဲ့ website မှာလုံခြုံ Chrome ကို kiosk မုဒ်ထဲမှာ Run နှင့် PC ကိုနှိမ့်ချ lock ။
နိုဝင်ဘာလ၏ 11th တွင် 2019 Netkiosk imperi ကို Netkiosk imperi 2020 ဖြင့်အစားထိုးလိမ့်မည်။ အောက်က preview ပုံများကိုကြည့်ပါ။
Netkiosk Imperial သို့မဟုတ် Chrome ကို Kiosk အဖြင့်သင်တို့ကိုချက်ချင်းသင့်ရဲ့ PC များချ lock နိုင်ပြီးလုံခြုံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် kiosk မုဒ်တွင် Google Chrome ကို run ။ Netkiosk Imperial အထူးလုံခြုံတဲ့ kiosk မုဒ်တွင် Google Chrome ကို run ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံတဲ့ admin ရဲ့ panel ကနေတဆင့်သင်တစ်ဦး built-in အဖြူရောင်စာရင်း filter ကိုအတူက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Chrome ကဤသူသည်သင်တို့ settings ကို secure သို့မဟုတ်သင့်ပြတင်းပေါက်ပစ္စည်းတွေချ lock မှခွင့်ပြုမထားဘူးတဲ့ kiosk မုဒ် option ကိုရှိပါတယ်ပေမယ့်။ Netkiosk Imperial ၏ထုံးစံဗားရှင်းပထမဦးဆုံးအောင်မြင်စွာဒီဇင်ဘာလ 2015 စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမှာတပ်ဖြန့်ခဲ့သည်။ Netkiosk Imperial နှင့်အတူ 4000 Windows ကိုလှည့်ပတ်တက်ဘလက်များလုံလုံခြုံခြုံ Google Chrome ကိုပွေးလေ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်အတော်များများဟာသူတို့ရဲ့အများပြည်သူလက်လှမ်းသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်း PC များလုံခြုံရန် Netkiosk Imperial ကိုအသုံးပြုပါ။ မေလ 2019 Netkiosk Imperial ၏အဖြစ်နေဆဲစင်ကြယ်သော kiosk မုဒ်တွင် Google Chrome ကို run ဖို့တစ်ခုတည်းသောဆက်ကပ်အပ်နှံကို kiosk software ကိုဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
100% Chrome ကို kiosk မုဒ်။
dedicated Chrome ကိုကို kiosk ဖြေရှင်းချက်။
လက်ငင်း PC ကိုနှိမ့်ချ lock ။
အရွယ်အစား 10 mb Install
အားလုံး Netkiosk ဗားရှင်း။ တစ်ခုမှာရိုးရှင်းတဲ့စျေး။ multi ဗားရှင်းလိုင်စင်။ multi PC ကိုလိုင်စင်။
Netkiosk 2019 အားလုံးလက်ရှိ Netkiosk ဗားရှင်းပါဝင်သည်။
Netkiosk 2019 နှင့်တကွသင်တစ်ဦးတည်းသာ subscription ကိုလိုင်စင်ပေးဆောင်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်လက်ရှိ Netkiosk ဗားရှင်း get နှင့်သင်စတင်ရန်တစ်ပေါင်းစုံကို PC လိုင်စင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဗားရှင်း (အခမဲ့အထောက်အအစီအစဉ်များအပါအဝင်) ပါဝင်သည်
Netkiosk နျ Standard 2019.
Netkiosk Imperial 2019
Netkiosk Folder ကို Lock ကို.
Netkiosk ကို USB Locker.
နောက်ထပ်အင်ဖို / Now ကိုဝယ်ပါ။
Netkiosk imperi 2020 ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်စက်စက်ခရိုမီယမ်စွမ်းအင်သုံး kiosk software ကိုဖြေရှင်းချက်။ သင်အများဆုံးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးခြင်း။
Netkiosk imperi 2020 ။ ခရိုမီယမ် Powered Kiosk ဆော့ဝဲ။
Netkiosk imperi 2020 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Chromium ပါဝါ kiosk software solution အသစ်ဖြစ်သည်။ Netkiosk imperi သည် Google Chrome ကဲ့သို့စွမ်းအားပြည့်ပြီး tabbed kiosk browser သို့မဟုတ် full screen display kiosk browser ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသော admin panel မှသင့်အား homepage၊ အဖြူရောင်စာရင်းနှင့် content filter နှင့် custom popup blocker တို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Netkiosk imperi တွင်အထူးပြုလုပ်ထားသော touch keyboard ပါဝင်သည်။
Netkiosk imperi သည် Windows ဗားရှင်းအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
ခရိုမီယမ် powered ။
Tabbed / Display kiosk browser
အကြောင်းအရာ filter ။
Backbround Options ကို မာတိကာ
Netkiosk imperi 2020 ။ 11 နိုဝင်ဘာ 2019 ကိုထုတ်ပြန်ပါ။
Netkiosk imperi 2020 ၏ပုံများကိုကြည့်ပါ။ ခရိုမီယမ် Powered Kiosk ဆော့ဝဲ။
Netkiosk Imperial 2020
Preview (ညာခလုပ်နှိပ်ပါ။ အသစ်ဖွင့်ပါ)
အဆိုပါ No1 ။ Windows ကို Kiosk အ Software များ။
အမေရိကန်နှင့်အခြားအစိုးရဌာနများအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိများစွာသောအခြားအဖွဲ့အစည်းများ Netkiosk အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုထားတော်မူ၏။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးမီကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်၏အချို့တို့ပါဝင်သည် Porsche Leipzig, ကုမ္ပဏီ Daimler ဂျာမဏီ, SMBC ဘဏ်တိုကျိုဂျပန် နှင့် ယူအေအီးအတွက် Marks & Spencer Stores.
Bayer ဆေးဝါးများ။ အာရှရှိစက်ရုံများစွာ၌ Netkiosk ကိုတပ်ဖြန့်ချထားသည်။
စပိန်အမျိုးသားရွေးကောက်ပွဲများ။ 20th ဒီဇင်ဘာလ 2015: 4000 ကိရိယာများပေါ်တွင်ချထားစိတ်တိုင်းကျ Netkiosk ဗားရှင်း။
ရွေးကောက်ပွဲများအွန်ကနေဒါ။ 7th ဇွန်လ 2018: 25000 ကိရိယာများပေါ်တွင်ချထားစိတ်တိုင်းကျ Netkiosk ဗားရှင်း။
ရွေးကောက်ပွဲကနေဒါ saskatchewan 2020 ။ စိတ်တိုင်းကျ Netkiosk ဖြေရှင်းချက်။
Netkiosk ရုံ 1 ကို PC ပေါ်မှာနည်းတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Customer များ၏အချို့
ကုမ္ပဏီ Daimler (Mercedes-Benz), Porsche, Marks & Spencer ယူအေအီး, SMBC ဘဏ်ဂျပန်နှင့်အများအပြားကပို။
Backbround Options ကို
kiosk software ကိုရိုးရှင်းတဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Netkiosk မှာကျနော်တို့ကို kiosk sofware အတွက်အထူးပြု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အစိုးရဌာနများ, Corporation, ပညာရေးနှင့်ကြီးမားများနှင့်အသေးစားနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများ, ပါဝင်သည်။ Netkiosk, ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တတ်နိုင်ကို kiosk software ကိုပူဇော်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ 2011 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဒဿနစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်လိမ္မာပါးနပ်တီထွင်မှုကနေတဆင့် Netkiosk အကောငျးဆုံးပါစေနှင့်တတ်နိုင် Kiosk အ Software များရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖောက်သည်မောင်းနှင်တီထွင်မှုကမ္ဘာတဝှမ်းလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကို kiosk software ကိုဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးဖြစ်လာရန် Netkiosk ကူညီပေးခဲ့တယ်။ တန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည် input ကိုကျွန်တော်တို့ကို Netkiosk လက်ရှိနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစောင့်ရှောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်အ Netkiosk မဆိုဖြစ်နိုင်သောကို kiosk ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်မည်ကိုသေချာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောစိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်ဖောက်သည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုပေါ် မူတည်. ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်အပို features တွေတောင်းခံဖို့လွတ်လပ်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤလူတိုငျးအတှကျတစ် Win-Win solution ကိုဖန်တီးမျှော်လင့်ပါတယ်
Netkiosk ကို Global:
အမေရိကန်နိုင်ငံ (LA) + 1 (650) 614 1646
မူပိုင်ခွင့်© Netkiosk kiosk software
Netkiosk အားဖြင့် Powered , 2019 Netkiosk Kiosk အ Software များ